Kumhara & Kubata
LASHING & KUSIMBIRA
Nezve zviwanikwa zvepamhepo uye zvigadziriso zve COVID-19 muSouth Africa, ndapota shanya SAcoronavirus.co.za
Yakagadzwa muna 1969, Narrowtex iri kupemberera makore makumi mashanu ekugadzira kugona. Narrowtex inogadzira uye inoburitsa kunze kwekuruka polyester tambo, yakarukwa polyester kurovera, yakasanganiswa tambo, yakasungirirwa tambo, seatbelt webbing, maindasitiri webbing uye keteni matepi.
Kubva pane ruzivo uye hunyanzvi hwehunyanzvi, pamwe nemhando yepamusoro yeprimiyamu, Narrowtex yakagadzira nzvimbo inozivikanwa mumisika yemuno neyekunze ine 55% yemavhoriyamu echigadzirwa ari kupihwa kuEurope, USA neAustralia.
Zvinoenderana nekuzvipira kwedu kuenderera mberi nekuvandudza mashandiro uye kuramba tiri pamberi pamusika wakamanikana wemachira, Narrowtex inobata zvitupa zvinotevera:
Iyo Narrowtex yekugadzira nzvimbo yazvino murabhoritari inoshandiswa kuenderera kuyedza pamatanho akasiyana ekugadzira, kuverengera kuendesa kwedu kusingagumi kwezvigadzirwa zvepamusoro.
Narrowtex inoshandisawo maLab akatenderwa ekumisheni kureva tensile muchina uye ane zvitupa zvekubvisa zvakapihwa neLab rakabvumirwa. Kana zvichidikanwa nevatengi, Narrowtex inogona kupa zvinotevera:
Tensile Bvunzo Chiitiko
COA - Chitupa Chekuongorora
COC - Chitupa Chekuenderana
Izvi zvitupa zvinonyora zvakatemwa nevatengi uye chaiko bvunzo mhinduro.
Iyo Narrowtex yekugadzira nzvimbo uye hofisi huru iri muSouth Africa mudhorobha repakati peguta reEstcourt, umo vagari vanozadzisa zvinodiwa nevashandi vefekitori, vachipa basa rinodiwa kwazvo munzvimbo iyi. Izvi zvinoumba chikamu cheNarrowtex chirongwa chezvemagariro chevanhu icho chinobatsirawo zvikoro zvemuno nemari kana zvimwe zvakakosha zvemari.
Narrowtex chikamu che NTX Boka iyo inoumba chikamu che SA BIAS Maindasitiri Pty Ltd.
253 Loskop Mugwagwa
Runhare: (+27) 36 35 23108
Rakarukwa Polyester Lashing
Yakarukwa Polyester Kubata
Yakabatanidzwa / Hotmelt Kubata
Narrowtex kupaza uye kusunga zvinhu
Kumhanyisa Cargo Solutions
Copyright © 2020 | Narrowtex chikamu cheNTX Boka rinova chikamu cheSA BIAS Industries Pty Ltd.